နေမျိုး | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: နေမျိုး
ငါ့ကို အရင်ဆုံး ခေါ်ငင်ပါ။
ငါ့အမည် စာရင်းကို အရင်တင်သွင်းပါရစေ။
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်မောင်ရင်, နေမျိုး, Kabyarz, Khin Mg Yin, nay myo | Permalink.
နေ့လယ်ခင်း (၁) (နေမျိုး)
တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေက ပူတယ်
အပြင်ဘက် လမ်းမပေါ်လည်း ပူနေမှာပဲ
ဝရန်တာမှာ ဘယ်သူမှ မရှိ
ကုလားထိုင်ဟောင်းတစ်လုံး ငြိမ်သက်လို့ နေရောင်ထဲမှာ
ညနေ ၄း၀၂ နာရီ
(ကဗျာလောက စုစည်းမှု-၁။ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၂ – နှစ်ကာလများ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ကဗျာလောက, နေမျိုး, Kabyarz, lanolay, nay myo | Permalink.
နေ့လယ်ခင်း (၂) (နေမျိုး)
ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးရွက်ဟာ ငြိမ်လို့
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ နေရောင်ခြည်က လင်းလို့
လမ်းမကြီးပေါ်မှာ စစ်ကျန် ဘတ်(စ်)ကား
ငြီးငွေ့မှုဟာ ငါ့မှတ်ဥာဏ်မှာ ထိုးဆိုက်လာပြီ
လေထုထဲက အထိအတွေ့ကို မှတ်တမ်းရေးစဉ်
ဗာဒံပင် သစ်ရွက်လေတိုးသံ ကြားမိ။
မွန်းလွဲ ၂း၄၆ နာရီ
နေ့လယ်ခင်း (၃) (နေမျိုး)
မနေ့က တံခါးရွက် ဒီနေ့လည်း ဖွင့်ထားလျက်
မနေ့က အခန်းထဲမှာ ဒီနေ့လည်းငါ
မနေ့က မြင်ကွင်းများ ဒီနေ့လည်း ပြီးဆုံးမသွား
ဈေးသည်တွေ အော်ဟစ် ရွေ့လျားနေမြဲ
မွန်းလွဲ ၂း၅၇ နာရီ
နေ့လယ်ခင်း (၄) (နေမျိုး)
လမ်းပေါ်က အသံတွေ နီးလာလိုက်
လမ်းပေါ်က အသံတွေ ဝေးသွားလိုက် တတီတီ
တဒီးဒီး တဝေါဝေါ တစ်ဟုန်ထိုး
ဖြည်းဖြည်းချင်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ တရွေ့ရွေ့
စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခရီးသည်တင်၊
မွန်းလွဲ ၃း၂၇ နာရီ
နေ့လယ်ခင်း (၅) (နေမျိုး)
မွန်းလွဲ ၂၀၅ နာရီ
နေ့လယ်ခင်း (၆) (နေမျိုး)
လေနှင်ရာ ဟိုတစ်ဖက်ကို တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွား
နေ့လယ် ၁၂း၅၅ နာရီ